Imikhuba engu-7 Yesicelo Esiphumelelayo seWebhu 2.0 | Martech Zone
Imikhuba engu-7 Yesicelo Esiphumelelayo seWebhu 2.0
NgoMsombuluko, Okthoba 30, 2006 NgoLwesithathu, Okthoba 8, 2014 Douglas Karr
UDion Hinchcliffe ubhale i-athikili enhle ku- Ajax Developers Journal, nayi ingcaphuno engiyithandayo:
Okubalulekile kwe-Leveraging Web 2.0
Kalula Yokusebenzisa isici esibaluleke kunazo zonke zeWebhusayithi, uhlelo lweWebhu, noma uhlelo.
Vula idatha yakho ngangokunokwenzeka. Akunakusasa ekuqoqeni idatha, kuphela ukuyilawula.
Ngokobudlova engeza izingodo zempendulo kukho konke. Khipha izihibe ezingabonakali zibalulekile futhi ugcizelele lezo ezinikeza imiphumela.
Imijikelezo yokukhishwa eqhubekayo. Ukukhululwa okukhulu, kuba nzima kakhulu (ukuncika ngokwengeziwe, ukuhlela okuningi, ukuphazamiseka okwengeziwe.) Ukukhula okungokwemvelo kunamandla amakhulu, kuyashintsha, futhi kuyabekezelela.
Yenza abasebenzisi bakho babe yingxenye yesoftware yakho. Bangumthombo wakho obaluleke kakhulu wokuqukethwe, impendulo nentshisekelo. Qala ukuqonda ukwakheka komphakathi. Nikeza ukulawula okungabalulekile. Noma abasebenzisi bakho kungenzeka baye kwenye indawo.
Shintsha izinhlelo zakho zokusebenza zibe amapulatifomu. Uhlelo lokusebenza luvamise ukusetshenziswa kusengaphambili okukodwa, ipulatifomu ukuklanywa kube yisisekelo sento enkulu. Esikhundleni sokuthola uhlobo olulodwa lokusetshenziswa kusuka kusoftware nedatha yakho, ungahle ube ngamakhulu noma izinkulungwane zazo.
Musa ukudala umphakathi wezenhlalo ukuze ube nazo. Akuyona into yohlu lokuhlola. Kepha nika amandla abasebenzisi abaphefumulelwe ukuthi bazidale.
Ngingangeza into eyodwa, noma ngikhulise ku-'Ease of Use '. Ukusetshenziswa Kokusetshenziswa kalula kunezinto ezi-2:
Ukusebenziseka - indlela umsebenzisi ayisebenzisayo ekwenzeni imisebenzi kufanele ibe yemvelo futhi ingadingi ukuqeqeshwa ngokweqile.
Idizayini enhle - Ngiyakuzonda ukuvuma lokhu, kepha idizayini ehlukile izosiza. Uma unesicelo samahhala, mhlawumbe akubalulekile kangako; kepha uma uthengisa insizakalo, kulindeleke ukuthi ube nemidwebo emihle nokuhlelwa kwamakhasi.
Guqula uhlelo lwakho lokusebenza lube ngamapulatifomu nemijikelezo yokukhipha eqhubekayo bobabili baziboleka kubuchwepheshe be-'wijethi, i-plugin, noma i-add-on '. Uma kunezindlela zokwakha ingxenye yohlelo lwakho lokusebenza evumela abanye ukuthi bakhe kulo, uzokhulisa intuthuko ngaphesheya kwezindonga zenkampani yakho.
Angiqiniseki ukuthi ngivumelana nokuthi 'Vula idatha yakho' kepha ngiyavuma ngokusebenzisa idatha yakho. Idatha evulekile kulolu suku nobudala ingaba yinkinga yobumfihlo; kodwa-ke, ukusebenzisa idatha enikezwa abasebenzisi bakho kulindelwe. Uma ungibuza ukuthi ngilithanda kanjani ikhofi lami, ngiyethemba ukuthi ngokuzayo lapho ngithola ikhofi, kuyindlela engilithanda ngayo! Uma kungenjalo, ungangibuzi kwasekuqaleni!
Tags: ukuthuthukiswaplatformIwebhu ye-2.0
iElegance? Isonto lokuqala lokuthuthela kwami ​​kwi-MacBook Pro